विश्व कला जगतमा हामी जानैपर्छ : कुलपति कर्माचार्य – Nepali Digital Newspaper
विश्व कला जगतमा हामी जानैपर्छ : कुलपति कर्माचार्य
घटना र विचार, न्युज डेस्क V 1 year ago January 4, 2019
नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान(नाफा)मा तेस्रो कुलपतिका रुपमा कलाकार कान्छाकुमार कर्माचार्य नियुक्त भएका छन् । विसं २००४ मा जन्मिएका कर्माचार्य २०६६ सालमा प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिव बनेका थिए । विसं २०२१ देखि चित्रकला साधनामा लागेका उनिसँग कला क्षेत्रका सङ्घसंस्थामा विभिन्न पदमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । उनै केके कर्माचार्यसँग ललितकलाको विकास र चुनौतीका विषयमा राससले कुरा गरेको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग राससका प्रधानसम्पादक श्याम रिमाल र उपसमाचारदाता नारायण ढुङ्गानाले गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :
प्राज्ञ सभाको पूर्णता चाहिँं कहिले हुन्छ नि ?
अब हामी तीन जनाको शपथ भयो, अरु बाँकी नै छ । अहिले निर्णायक कुराहरु केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौंँ । अनौपचारिक रुपमा भन्दा कलाको समग्र विकास गर्नुप¥यो । हरेक प्रदेशमा गएर प्रादेशिक ढङ्गबाट कलालाई विस्तार गर्नुपर्छ । हाम्रो परम्परागत रुपमा गरी आएको राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी अर्काे साल हुनेछ । त्यसलाई सुधार्नुपर्छ, त्यो परम्परागत भयो । त्यसले विकासभन्दा पनि हल्लैहल्ला बढी भयो । त्यसलाई सुधार गर्ने योजना छ । अर्काे सबैभन्दा पहिले त हामी त अहिले सुकुम्बासी भएका छौँ । बस्ने ठाउँ बनाउनुपरेको छ । निवर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले केही पूर्वाधार बनाउने योजना गरेको छ । त्यसलाई छिट्टै पूरा गर्ने योजना छ ।
कार्यक्रम पारित भएको हो । त्यो कार्यक्रम अगाडि गइरहेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । फलोअप(अनुगमन) गर्नुपर्छ । त्यसै त हुँदैन ।
यो विवाद एकदम जटिल विवाद हो । केही वर्षअघि सरकारले नाफाको जग्गा सङ्गीत एकेडेमीलाई दिने भनी गरेको निर्णयमा हामी साह्रै दुखित छौं । आम कलाकार दुखित छन् । हामीले यसलाई गुमाउनु हुँदैन । हामी आर्टिष्ट आफैँ सुकुम्बासी भएर अरुलाई पोस्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि ?
हो, त्यो क्याबिनेटले गरेको निर्णय हो । हाम्रा पूर्वकुलपतिज्यूको कुरा अनुसार उहाँहरुकै समयमा सो निर्णय भयो, भित्री कुरा हामीलाई थाहा छैन । कमसेकम जग्गा दिने नै हो भने सल्लाह गर्नुपथ्र्याे । यो विषय सरकारले जिम्मा लिने कुरा हो, सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । नाफा मगन्ते हुने स्थिति त हुनु भएन । एकेडेमीहरु गठनभन्दा अघि नै भएको छलफलमा नाचघर सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने र नाफाले आफ्नै ठाउँ(सीता भवन, नक्साल, बालसङ्गठन रहेको भवन) मा बस्ने भनेर हामी यहाँ आयाँैं । अब उहाँहरु(सङ्गीत एकेडेमी) जानु भएन, त्यो उहाँहरुको कुरा हो । उहाँहरु बहालमा बस्दै आउनुभयो र समस्या बढ्दै आएपछि आत्तिनु भयो । यहाँ धेरै जग्गा छन् नि सरकारका, खोज्यो भने पाइहालिन्छ नि । सरकारलाई केको दुःख हुन्छ र ? यो कुरा अदालतमा गएको छ, अदालतले एउटा फैसला गर्ला ।
जतिपनि हाम्रा कला सिर्जना भएका छन्, तिनको संरक्षणका लागि नाफाले व्यक्तिगत रुपका जस्तै सम, वाङ्देल, मिश्र आदिका कलाकृति व्यक्ति व्यक्तिका घरमा छन्, कतिपय बेचिए होलान्, नाफाले तिनको संरक्षण गर्ने दायित्व लिनुपर्ने हो कि होइन ?
नाफाका पहिलो कुलपति किरण मानन्धरले आफू नियुक्त हुँदा अब कुनै पनि कलाकार भोको रहनु पर्दैन् भन्नुभएको थियो । त्यो बेला यहाँ सदस्य सचिव हुनुहन्थ्यो । त्यो भनाइको सार्थकता पूरा भयो कि भएन ? नभएको भए नाफाले कलाकारका लागि अब के गर्नेछ त ?
उहाँले त्यसो भन्नुभयो । त्यो त्यति सजिलोसँग हुने त होइन । त्यो भनेको कलाको विकास गर्ने हो । यसका लागि अनेक बाधाअड्चन आउने गर्छन् । एउटा भूकम्पले पनि बाधा ग¥यो । संस्थागत रुपमा पनि बाधाअड्चन भयो । त्यसकारण काम गर्न सकिएको देखिएन । कलाको विकास भयो भने सबैको विकास हुन्छ । यो दृष्टिकोण मेरो हो । गम्भीर कुरा एउटा भन्छु हामीकहाँ पनि कलाको लिलामीको व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसो भएमा कलाकारलाई केही राहत पुग्छ ।
नेपाली कलाको सिलसिलाबद्ध इतिहासलेखन नारायणबहादुर सिंहबाट शुरु भएको थियो । यस्तो लेखन र अन्य प्रकाशनबारे नाफाले के गर्दै छ ?
ऐतिहासिक, पुरातात्विक र कलाका दृष्टिले महत्वपूर्ण धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरीलगायतको पुनःनिर्माणमा कलाकारहरुको आवाज उठेको देखिंँदैन नि ?
तिनको पुनःनिर्माणमा हामी पनि सहभागी होऔं भन्ने कुरा आए जस्तो लाग्दैन, पुराना कलाकारले काम पाए होलान् तर नयाँलाई पारिश्रमिक दिएर आह्वान गरे जस्तो लाग्दैन ?
केही हदसम्म नगरेको होइन । यो बेग्लै च्याप्टरले गर्ने हो । यसमा पनि पुरातत्व विभागको बढी हात छ । गुरुङ, नेवार जातिको सङ्ग्रहालय खडा गर्न इजाजत लिनुपर्छ । नाफासँग केही अधिकार छैन । सके सहयोग गर्नेबाहेक हाम्रो भूमिका रहँदैन । हामीमा सबै पूर्वाधार तयार भएको भए पनि आँटेर काम गर्न हुन्थ्यो । बढी महत्वाकाङ्क्षी पनि हुनु भएन । यो लोककलासँग पनि सम्बन्धित छ । कलाकारको एउटा सधैंँको गुनासो छ, नाफाले नयाँ काम र कला क्षेत्रको विकासमा मौलिक काम गर्न सकेन भन्ने छ ।
शनि, जेष्ठ १७, २०७७
संसदबाट पारित नहुन्जेल एमसिसीका कार्यक्रम स्थगन गर्ने नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय